Samsung Galaxy Watch 3: famolavolana sy endrika manaparitaka | Androidsis
Amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra, dia zava-misy miharihary fa hanolotra ny phablet voalohany i Samsung. Eny, ny Samsung Galaxy Note 20 dia ho tonga amin'ny volana aogositra. Fa tsy ho irery ianao. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria manana angona bebe kokoa momba ny Samsung galaxy watch 3, ny smartwatch manaraka an'ny orinasa.
Efa nilaza taminay ny momba ny sasany izahay antsipirian'ny fiambenana marani-tsaina antenaina, ary ankehitriny dia afaka manamarina ny endrika sy ny ankamaroan'ny Samsung Galaxy Watch 3 endri-javatra, akanjo azo tondroina izay fomba hahatongavan'ny baomba amin'ny taona.
Ity no Samsung Galaxy Watch 3
Eny, tsy misy sisa tavela ny Samsung Galaxy Note 20 sy ny Galaxy Watch 3 haseho. Eny, amin'ny 5 Aogositra ho avy izao dia ho fantatsika ny antsipiriany rehetra, na dia mahita ny fivoahana farany aza dia mazava fa vitsy ny vaovao afaka hanolotra antsika. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria amin'ny alàlan'ny Tenna sy ny My Smart Price, dia azontsika atao ny manamarina ny ankamaroan'ny endrika sy toetran'io akanjo io.
Hanombohana azy dia hanana maodely roa isika, ny iray vita amin'ny titanium miaraka amina bezel mihodina, ary koa ny maodely faharoa vita amin'ny vy tsy misy fangarony ary toa tsy hisy ilay bezel. Etsy ankilany, ny maodely roa (1.4 sy 1.2 santimetatra) dia tontonana AMOLED miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass DX.
Tsy ampy ho anao? Fantaro fa ireo maodely ireo dia tsy ho eny ivelan'ny lalana ary tena mahatohitra ny fahatairana sy ny fahalavoana, misaotra ny Fanamarinana fanoherana IP68 sy MIL-STD-810G. Ary eny, ny maodely roa tonta dia afaka handrefy oxygen oxygen sy ECG hanatanteraka electrocardiograms.
Farany, lazao fa ny kinova roa dia hanana memoara anatiny 8 GB, hahafahantsika manampy mozika sy mampiasa azy irery, ary koa bateria mampanantena fizakantena tsy handiso fanantenana anao. Bebe kokoa, mahita fa samy Samsung galaxy watch 3 Ny maodely 45mm, toy ny maodely 41mm, dia hiara-miasa amin'ny Tizen, ny mpanelanelana ho an'ny mpanamboatra ho an'ny fizarazarana entina ary mampirehareha ny fahombiazan'ny angovo avo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung Galaxy Watch 3 tafaporitsaka tamin'ny bezel mihodina!
Ny fenitra avo roa heny an'ny Apple, Apple Music ao amin'ny Play Store dia mampiasa ny fomba fandoavany vola manokana hisorohana ny komisiona 30% an'i Google